Ndị na-emepụta ihe na-eresị Google ịhụnanya na ịkpọasị | Androidsis
Amaghị m ihe na-eme, ma n'oge a Android emeputa amalite ịrị elu ọnọdụ na ahịa n'ụwa nile, ego ya na-amalite ibili n'ụzọ nke na ọ na-amalite chepụta ụzọ ọ ga-esi bụrụ onye nrụpụta onwe ya karịa ka ọ dị. Ọ bụrụ na anyị doro anya na-ele anya na ihe atụ nyere ndị ọzọ nnukwu ụlọ ọrụ, Samsung na ya Tizen na Microsoft na ya Windows Phone, ọ bụ ezie na nke a bụ n'èzí orbit nke Google na gam akporo, eziokwu bụ na ha bụ a nkịtị ọdịda .
Huawei, ịbụ onye na-emepụta ekwentị kacha atọ n'ụwa, ekwupụtala na ọ bụ ya na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ gị maka ngwaọrụ mkpanaka na nke a na-emepụta, maka inri ọzọ, site n'aka ndị ọrụ Nokia mbụ. Ọ chọrọ iwepụ ndabere ya na Google na n'ihi nke a ọ na-enye anyị ka anyị chee echiche banyere mmekọrịta ịhụnanya na ịkpọasị nke ndị na-emepụta ihe na-ere ahịa kachasị na mbara ala. Samsung bụ onye mbụ mepere ụzọ a na Tizen ya, nke ghọrọ OS maka wearables ebe ọ na-aga n'ihu na-egosipụta etu ha si eme nke ọma na ihu Galaxy S7 n'agbanyeghị egwu na etiti etiti na-abịa site na Eshia ga-ewepụ ya. ha. Ọchịchị ha na-akwado.
1 Nsogbu karịa ngwọta
2 Ị nwere ike ịnọ n'okpuru Android mana na-enweghị Google
Nsogbu karịa ngwọta
Echere m na ọ gbasara echiche nke gị ka ị bụrụ onye ọchụnta ego na inwe nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nweta oke ahụ,gịnị kpatara na ị naghị etinye egwu karịa ma gbalịa ịrịgo n'ihu n'ugwu ukwu ahụ? Naanị ihe nwere ike ime bụ na ị sụọ ngọngọ nke ukwuu nke na ị ga-ahụ onwe gị na mberede n'okpuru ugwu ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Samsung na mgbe ọ malitere na Tizen ya, ahịa nke elu ya agwụla ma ọ ghaghị itinye batrị azụ iji weta Samsung Galaxy S7 dị egwu.
Huawei nwere ike ịmalite n'ime sistemụ arụmọrụ ya, mana ọ chọkwara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmepe iji banye na OS ya iji malite ngwa ndị ahụ niile onye ọrụ ọ bụla chọrọ taa. Ọ na-eri Microsoft ihe ya, na ndị kasị nkịtị na trendiest ngwa malite ha nsụgharị na Windows Phone; na ụfọdụ nsụgharị na-adịghị abịa na niile atụmatụ na nke dị n'elu na-emelite oge ọ bụla zuru oke.
Ma ọ bụrụ na anyị na-aga n'ihu na-ekwu okwu na Microsoft, nke a bụ otu n'ime ihe ndị metụtara ngwanrọ na ngwá ọrụ mmepe ya bụ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ. Na ọbụna na ndị a ka o nwere ike cajole mmepe, karịsịa nnukwu aha. Mgbe anyị na-ekwu maka OS ọzọ, anyị na-ekwu maka otu ọzọ nke ahụ nwere ịzụlite concretely maka ikpo okwu ahụ, yabụ ị ga-etinyekwu ego n'ịkwalite ngwa gị na sistemụ arụmọrụ ahụ, ọtụtụ na-ahapụkwa ụzọ ahụ.
Ị nwere ike ịnọ n'okpuru Android mana na-enweghị Google
El okwu "ndụdụ" bụ ihe na-abata n'uche mgbe anyị na-ekwu maka Fire OS, Remix OS ma ọ bụ ọbụna Cyanogen Inc site n'ụzọ ahụ isi nweta nkwekọrịta na Microsoft ịgụnye ụfọdụ ngwa ha nwere na gam akporo. Ọ bụ ezie na ndị Mountain View na-achọwanye ike ịchịkwa OS ma manye ndị mmepe ka ha nwee otu asụsụ imewe, lee Ihe Nhazi, nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike ịlanarị na-enweghị n'okpuru iwu na njikwa Google.
Na Amazon Ọ dịghị njọ na Fire OS, n'ebe ahụ ọ na-aga n'ihu na-ebupụta mbadamba ọkụ nke ọ na-ere dị ka donuts dị ka nke ikpeazụ na-adịghị gafere € 60; na Jide anyị na-ekwu maka Remix OS nke na-ekwe nkwa karịa na nke na-agbazinye onwe ya ịbụ onye ọzọ; na Cyanogen Inc, ya na CyanogenMod ya na ọbụbụenyi na Microsoft, na-edugakwa anyị ịmara na ị nwere ike ibi na gam akporo ma na-enweghị Google.
Google enweghị mmasị ma, n'oge a, iji kpochapụ okwu ndụdụ, n'ihi na n'ikpeazụ gam akporo na-abịa site na ebe ọ si. Nwee ndị ọzọ na-aga n'ihu na-enye ihe ọzọ pụtara gam akporo na ọ na-ebuli ohere nke sistemụ arụmọrụ ka ọtụtụ ndị mmepe na-eji ya maka ọdịmma ha yana nke ndị ọrụ ga-eme n'ọdịnihu nke ụdị ndụdụ. Android nwere ike bụrụ usoro mechiri emechi n'ọdịnihu, mana nke ahụ ga-abụ akụkọ ọzọ sitere na nke anyị nwere ugbu a na tebụl.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Thehụnanya na ịkpọasị nke Google gosipụtara na ndị nrụpụta na-ere ahịa kachasị